ပုံနှိပ်ခြင်းမှင်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ | တရုတ်ပုံနှိပ်မှင်စက်ရုံ
Flexo ပုံနှိပ်စက်အတွက်ပုံနှိပ်မင်များ ၁။ ECO အတည်ပြုပြီး ၂ ။ EN-71-3 အတည်ပြုခဲ့သည် ၃။ ROHS မှအတည်ပြုချက် ၄။ Dehp အတည်ပြုထားသောလက္ခဏာများ ၁။ အစိမ်းရောင်နှင့် Eco ဖြတ်သန်းခြင်း၊ အနံ့ဆိုးခြင်း၊ ရောင်စုံကောင်းမွန်သောအရောင်တောက်ခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်း၊ - အရောင်နွမ်း။ ၂။ နိုင်လွန် taffeta၊ polyester satin, polyester taffeta, acetate taffeta စသည်ဖြင့်တံဆိပ်ထည်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်မှုသည် anilox လိပ်အရွယ်အစားအတိုင်းနှလုံးအပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်းကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန်၊ ခြောက်သွေ့။ & n ...
Flexo မှင်များအတွက်အလတ်စားလျှော့ချ 1. ECO အတည်ပြုခဲ့သည်။ 2. ပုံနှိပ်သည့်အခါမှင်ပိုမိုချောမွေ့စေနိုင်သည်။ ၃။ စက်ကိုမသုံးမီအလယ်အလတ်လျော့ချသော ၁၀% နှင့်မှင်နှင့်ရောရန်လိုအပ်သည်။ 4. အခြားအမှတ်တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းမှင်နှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပုံနှိပ်ခြင်းမှင်များအတွက်ကုထုံးအေးဂျင့် 1. ECO အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂။ ဆေးကြောခြင်းစွမ်းရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းထည့်ထားသောမှင်နှင့်ရောစပ်နိုင်သည်။ 3. အခြားအမှတ်တံဆိပ်မှင်နှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။